အက်ဒ် ဝုတ်ဝက်ဒ်ရဲ့ အိမ်ကို မီးရှုးမီးပန်းတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ မန်ယူ ပရိသတ်များ - MySport Myanmar
အက်ဒ် ဝုတ်ဝက်ဒ်ရဲ့ အိမ်ကို မီးရှုးမီးပန်းတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ မန်ယူ ပရိသတ်များ
မန်ယူ ပရိသတ်တွေဟာ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းက မန်ယူအသင်းရဲ့ ဒုတိယ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် အက်ဒ် ဝုတ်ဝက်ဒ်ရဲ့ အိမ်ကို မီးရှုးမီးပန်းတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး မီးလောင်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မန်ယူ ပရိသတ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ပုံရိပ်တွေဟာ ဗီဒီယိုနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့သွားခဲ့ပြီး အချို့ မန်ယူ ပရိသတ်တွေ ဆိုရင်တော့ အက်ဒ် ဝုတ်ဝက်ဒ်ရဲ့ အိမ်ခြံစည်းရိုးတွေကို အရောင်ဆေး ဖျန်းခဲ့ကြသလို မီးရှုံးမီးပန်းတွေကို အိမ်ခြံထဲ ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Goal သတင်းက အက်ဒ် ဝုတ်ဝက်ဒ် နဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ် တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ အိမ်မှာ ရှိမနေခဲ့ကြဘူးလို့ ဖော်ပြခဲ့ပြီး တစ်ယောက်မှ ဒဏ်ရာ မရခဲ့ကြပေမဲ့ ရဲတွေက အမှုကို စုံးစမ်းစစ်ဆေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ အသင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချသွားခဲ့ပြီး တရားခံတွေကိုသာ မိသွားမယ် သိသွားမယ်ဆိုရင် တစ်သက်တာ ပွဲကြည့်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့ညမှာ မန်ယူအသင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တာက “မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမား တစ်ဦးရဲ့ အိမ်အပြင်ဘက်မှာ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာကို သိရှိရပါတယ်။ ဘောလုံး အသိုင်းအဝိုင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်မှာ ရပ်တည်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုကို သိရဖို့ မန်ချက်စတာ ရဲအဖွဲ့ နဲ့ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ သိရမယ် ဒါမှမဟုတ် ပါဝင်တယ်လို့ တွေ့ရမယ် ဆိုရင် တစ်သက်တာ ပွဲကြည့်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရပါမယ်”လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မနျယူ ပရိသတျတှဟော အင်ျဂါနေ့ ညနပေိုငျးက မနျယူအသငျးရဲ့ ဒုတိယ အမှုဆောငျ အရာရှိခြုပျ အကျဒျ ဝုတျဝကျဒျရဲ့ အိမျကို မီးရှုးမီးပနျးတှနေဲ့ တိုကျခိုကျခဲ့ပွီး မီးလောငျစနေိုငျတဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ပဈပေါကျခဲ့ကွပါတယျ။ မနျယူ ပရိသတျတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှု ပုံရိပျတှဟော ဗီဒီယိုနဲ့ အှနျလိုငျးမှာ ပြံ့သှားခဲ့ပွီး အခြို့ မနျယူ ပရိသတျတှေ ဆိုရငျတော့ အကျဒျ ဝုတျဝကျဒျရဲ့ အိမျခွံစညျးရိုးတှကေို အရောငျဆေး ဖနျြးခဲ့ကွသလို မီးရှုံးမီးပနျးတှကေို အိမျခွံထဲ ပဈပေါကျခဲ့ကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Goal သတငျးက အကျဒျ ဝုတျဝကျဒျ နဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုဝငျတှဟော သူတို့ရဲ့ အိမျ တိုကျခိုကျခံရတဲ့ အခြိနျမှာ အိမျမှာ ရှိမနခေဲ့ကွဘူးလို့ ဖျောပွခဲ့ပွီး တဈယောကျမှ ဒဏျရာ မရခဲ့ကွပမေဲ့ ရဲတှကေ အမှုကို စုံးစမျးစဈဆေးနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးကတော့ အသငျး ပရိသတျတှရေဲ့ လုပျရပျကို ရှုတျခသြှားခဲ့ပွီး တရားခံတှကေိုသာ မိသှားမယျ သိသှားမယျဆိုရငျ တဈသကျတာ ပှဲကွညျ့ခှငျ့ ပိတျပငျခံရမှာ ဖွဈပွီး ပွဈဒဏျ ခမြှတျခံရမယျလို့ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
အင်ျဂါနညေ့မှာ မနျယူအသငျး ထုတျပွနျခဲ့တာက “မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဘောလုံးအသငျး အနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ အလုပျသမား တဈဦးရဲ့ အိမျအပွငျဘကျမှာ တိုကျခိုကျမှု ဖွဈပှားခဲ့တာကို သိရှိရပါတယျ။ ဘောလုံး အသိုငျးအဝိုငျးက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နောကျမှာ ရပျတညျပေးမယျလို့ ယုံကွညျပွီး တိုကျခိုကျမှုကို သိရဖို့ မနျခကျြစတာ ရဲအဖှဲ့ နဲ့ ဆောငျရှကျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ တဈဦးတဈယောကျကို အပွဈရှိတယျလို့ သိရမယျ ဒါမှမဟုတျ ပါဝငျတယျလို့ တှရေ့မယျ ဆိုရငျ တဈသကျတာ ပှဲကွညျ့ခှငျ့ ပိတျပငျခံရမှာ ဖွဈပွီး ပွဈဒဏျ ခမြှတျခံရပါမယျ”လို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
— ? UtdXclusive ? (@UtdXclusive) January 28, 2020
MySport Myanmar2020-01-29T08:40:33+06:30January 29th, 2020|Football, News, Premier League|